Mishiinada gaarka ah | September 2019
"Centaur 1081D": miyuu ku haboon yahay in la ilaaliyo "bahalka" beertaada?
Centaur 1081D - muraayada baabuurta ee tayada iyo qiimaha la isku daro. On tayada waxay kuu ogolaaneysaa in aad u sheegto dib u eegista macaamilka wanaagsan. Qaabkani wuxuu iska leeyahay fasalka culus ee culus. Taasi waa sababta ay u shaqeyneyso iyada oo aan dhibaato lahayn heerar sare. Aynu si faahfaahsan u tixgelinno sifooyinka farsamada ee motoplock 10aur, iyo sidoo kale sifooyinka hawlgalka iyo dhibaatooyinka qaarkood oo laga yaabo in lagu arko shaqada.
Sababtu maxay tahay silsiladuhu ma bilaabaan: sababaha iyo daroogooyinka
Si loo fududeeyo foosha jireed, bani-aadmigu wuxuu abuuray qalab shaqo. Waxay u adeegaan inay saameynayaan walxaha iyo qalabka. Waxaa jira qalab farsamo iyo kuwa ay soo jiidaan pneumatic, dareemayaasha hidaha, tamarta shidaalka ama korontada. Qalabka loo isticmaalo dhismaha iyo dayactirka yaryar ee guriga.
Doorashada mashiinka dulliga ah ee bamgareynta bulaacada guriga
Ku noolaanshaha guri gaar ah ayaa leh faa'iidooyinkeeda, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay shaqo dheeraad ah. Mid ka mid ah waa in la hubiyo hawlgalka caadiga ah ee nidaamka bullaacadaha madaxabannaan. Si aanad u helin xaalado aan fiicneyn, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u qaaddo boogaha bullaacadaha. Ka fikir waxa qalabka casriga ah ee shaqadan iyo sida loo doorto si sax ah.
Doorashada benzokosa ee guriga iyo shaqada
Qashinka cawska waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeesha goobta. Cawska quruxda badani maaha wax lacag ah oo keliya, laakiin sidoo kale dadaal badan oo milkiilaha ah. Qashinka, waxaad shaki la'aan u baahan tahay tufid: koronto ama gaas. Sida loo doorto - aynu ka hadalno maqaalkeena. Shuruudaha xulashada iyo xuduudaha Ka taxadar markaad dooranaysid qalabka noocaas ah ee naqshadeynta beerta.
Top 5 shanlayaasha gaaska iyo guriga ee ugu fiican
Benzokosa waa wax lagama maarmaanka u ah labada beerta, beerta, iyo dadka deggan guryaha gaarka loo leeyahay. Si aad u doorato qalab dhab ah maaha wax sahlan, sababtoo ah maanta Benzocos ayaa si balaadhan loogu soo bandhigay iibka, iyada oo labadaba qoysaska iyo xirfadlayaasha. Tixgeli kuwa ugu wanaagsan. Qalabka benzokosy Cufan kasta wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha ugu muhiimsan: mishiinka; barbell; Wareejiyaha; jarida walxaha; xargaha; gacanta.
Mini-cufur "Bulat-120": dib-u-eegis, karti-farsameed ee qaabka
Beeridda dhulku waa hawl adag oo adag. Sidaa daraadeed, si loo fududeeyo shaqada beeraha, tiro badan oo qalab iyo qalab caawiya ayaa la horumarinayaa. Waxaa ka mid ah cutubyadan, waxaa jira "mini-tractor mini" oo ku shaqeeya "Bulat-120", oo ku saabsan qaabka shaqo ee la qabtay iyo sifooyinka aan ku sharaxi doono qodobkan.
Tilmaamaha farsamada iyo taariikhda DT-20
Diktoorkii DT-20 waa mirihii dhabta ahaa ee sayniska Ruushka. Inkastoo muddada gaaban ee la sii daayay, cutubkani wuxuu noqday mid caan ah oo ka mid ah ganacsatada beeraha iyo muwaadiniinta caadiga ah. Awooda, aan qabyo ahayn ee ka tagaya iyo karti u lahaanshaha shaqada xitaa xaaladaha cimilada ugu xun waxay sameeyeen cilaaqaadkan calaamad muujinaysa waqtigeeda, iyada oo aan taas oo aan aheyn shaqo beerta ah tobanaan sano.
Ugu sareeya 10 cawska gaaska cirka ee ugu fiican
Iibsashada ciyaalku waa iibsasho khatar ah oo qaali ah. Sidaa darteed, markaad dooranayso habka ugu haboon ee adiga kugu habboon, waa in aad marka hore bartid macluumaadka guud ee ku saabsan farsamadan, kadibna xuduudaha cawska caanaha ugu caansan suuqa. Shuruudaha Xulashada Si aad u doorto habka saxda ah ee buuxin doona shuruudahaaga oo aad u dheeraato waqti dheer, waxaad u baahan tahay inaad oggaatid hawlaha waaweyn iyo sifooyinka mashiinka qashin kala duwan.
Sida aad ogtahay, dhir kasta wuxuu u baahan yahay daryeel, oo ay ku jiraan daaweyn tayo leh oo ka dhan ah cayayaanka. Qalabka ugu fudud ee fulinta hababka noocan oo kale ah - sprayer. Iyagu ma awoodaan oo keliya geeddi-socodka cayayaanka, laakiin sidoo kale waxay sameeyaan dharka xididka. Iyada oo gacan laga helayo faleebo ayaa suurtogal ah in la isticmaalo nooc kasta oo dareere ah oo leh filin dhuuban iyo labis.
Hantidhaha Traktor DT-54
Rikoodheer DT-54, kaas oo ka badbaaday maalmahayaga, waa mid ka mid ah wargeysyada dhabta ah ee injineerka Soviinka. Tani waa mashiino caan ah oo la dabagalay. Qaybta fasalka 3aad ee xayiraadda ayaa fuliya dhammaan noocyada beeraha. Inkasta oo wax soo saarka tiknoolajiyada ee tiknoolajiyadu ay muddo dheer joogsadeen, qaabka hore ayaa wali ku shaqeynaya hawlaha loo xilsaaray si sahlan.
Sida loo doorto sawir loogu talagalay dabka ama milkiilaha guri gaar loo leeyahay
Xilligan, suuqa ayaa soo bandhigaya qalab kala duwan, kuwaas oo horay loo qiimeeyay inay yihiin qaali, hadda waxay leedahay qiimo aad u macquul ah. Oo hadda waxaan ka hadli doonaa sida loo baahan yahay, iyo mararka qaarkood si fudud oo lagama maarmaanka ah ee guriga, sida silsiladda arkay. Intaa waxaa dheer, noocyada kala duwan ee qalab this ee dukaamada our runtii waa weyn, iyo in la fahmo waxay noqon kartaa mid adag.
Dhaqdhaqaaqa beeraha K-744: karti farsameed ee qaabka
Beeraley badan inta lagu jiro iibsashada mashiinnada qaaliga ah waxay la yaaban yihiin: Ma habboon tahay inaad dooratid mashiinada guriga ama ma ka fiican tahay inaad siiso mawaadiicda dibadda laga keeno? Tixgeli cutubka gudaha, taas oo lagu gartaa shaqeynta iyo qiimaha wanaagsan. Ogow waxa K-744, maxaa loogu talagalay.
Qeexida iyo sifooyinka lifaaqyada ee Neva MB-2 motoblock
Qalabka Neva MB-2 oo leh qalab ku xiran dhowr ka mid ah kalluumeysatada xayawaanka ah ayaa wax ka qaban kara carrada si joogto ah loo beeray. Laakiin haddii aad ku qasban tahay inaad wax ka qabato carrada adag ama culus, markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qalab aad u daran. Iyada oo la adeegsanayo xulasho ballaaran oo ah lifaaqyo dheeraad ah, motoblock ayaa kaa caawin doona inaad qabato badan oo ah beeraha.
Ku lifaaq: 10 siyaabood oo dheeraad ah oo ku saabsan kobcinahaaga
Qalab-saaraha waa qalab casri ah, qalab badan, taas oo suurtogal u ah in ay si fudud u sahlayso shaqada beeraha nooc kasta. Waxaa loo isticmaalaa dabacsanaanta iyo jaridda dhirta, iyo sidoo kale in laga qaado cawska. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka qalabyada gaarka ah ee qalabka gargaarka ah ee loogu talagalay mootaal-saaraha ayaa si weyn u ballaarin kara baaxadda iyo shaqeynta.
Maxay tahay iyo sidee buu u shaqeeyaa toonta
Qof kasta oo khibrad khibrad leh wuxuu ogyahay sida ay muhiim u tahay in uu ku beero dhaqanka. Ka dib, natiijada ugu dambeysa waxay si toos ah ugu xiran tahay tayada beerashada. Si loo soo gooyo toonku wuxuu ahaa heer sax ah, waxaa jira qashin khaas ah. Waxay ka caawisaa fududaynta shaqada gacanta, iyadoo la siinayo natiijo fiican. Muuqaalka iyo mabda'a qalabka qalabka Qalabka wuxuu leeyahay nashqad habboon oo farsamaysan, taas oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo shaqa-bini-aadamka, taasoo sahlaysa oo wax soo saar leh.
Tilmaamaha iyo astaamaha farsamada ee gawaarida Belarus MTZ 1221
Gawaarida Belarus MT3 1221 waxaa loo isticmaalaa beeraha, dhirta, jidadka iyo adeegyada degmada. Iyada oo, samee dib u gurashada, waraabinta, bacriminta. Qalabku wuxuu shaqeeyaa iyadoo aan loo eegin cimilada iyo nooca carrada. Aynu ogaanno astaamaha farsamo ee qaabkani u dhow. Qalabka tareenka MTZ 1221 Tani waa darajo darajo afar-gaari ah oo 2-xabbo ah.
Tilmaamo farsamo iyo sifooyin isugu jira "Polesie"
Xaqiiqada ah in Polesye ay isku darsamayso goosashadii ay soo saareen shirkadda Gomselmash ee magaalada Belaruus ee Gomel ayaa loo dhoofiyaa dalal badan oo aduunka ah waxaana lagu dhisaa tartan culus oo la mid ah shisheeye aan la yaab lahayn. Xawaaraha uu naqshadeeyey Gomel designers, injineerka iyo shaqaalaha ayaa ku guuleystay guusha noocan oo kale ah.
Chainsaw "Friendship-4": sifooyinka farsamada iyo hawlgalka
Druzhba-4 chiansaw waa qalab waqti-lagu tijaabiyey jiilalka, kuwaas oo dhawaan si firfircoon loo isticmaalay labadaba waddankeena iyo waddamada deriska ah. Waxay noqotay hanti rasmi ah oo wax soo saarka gudaha ah waxaana lagu xasuustaa asxaabteyaal sida qalab lagu kalsoonaan karo oo aan qabyo ahayn, sidaas awgeed maanta muuqaalkan ayaa weli laga helaa nolol maalmeedka.
Xirfadlayaashu waa qalab aad u fiican oo ka shaqeynaya oo keliya beerta ama beerta, laakiin sidoo kale sameynta waxqabadyo khaas ah oo ku saabsan noocyo kala duwan oo warshadaha ah: kaydinta, dhismaha iyo kuwa kale. Xulashada qalabka noocaan oo kale ah waa in si taxaddar leh oo taxadar leh loo soo dhawaado, iyadoo la raacayo xuduudaha qaarkood, si ay hawsha ugu qabato geed qumman sida ugu macquulsan.
Ugu fiican ee beerista 2017 - 2018
Dhakhaatiir badan oo dachas ah oo ku mashquulsan falashada, ka feker sidaad uhesho kobcin ah kuwaas oo ka caawin kara shaqadan adag. Maqaalka ayaa ka wada hadli doona noocyada kala duwan ee kalluumeysiga, waxaad baran doontaa nuqullada ugu caansan oo lagu kalsoon yahay ee farsamadan. Horumarinta kalluumeyaha Horumarinta farsamada waxay ka caawisaa sidii loo beeray shaqooyin beereed, iyo mid ka mid ah guulaha waa beeriye - qalab loogu talagalay dabacsanaan iyo jaridda carrada.